China non-leafing aluminium unama ifektri abakhiqizi | I-Haofeng
Okunamathiselwe kwe-aluminium okungenamaqabunga kukhanya ngosayizi omuhle wengxenyenamba namandla okufihla, okunomphumela omuhle wokuhlobisa. Isetshenziselwa kabanzi upende wasolwandle, upende wesando, ukuqala kwemikhiqizo ye-electromechanical nopende wezimboni ojwayelekile. Kanye nokusetshenziswa kwesambulela sesikhumba sokumboza.
Okunamathiselwe kwe-aluminium okungenamaqabunga kuqukethe umumo we-aluminium olinganiselwe nomumo we-solvent ngokwelashwa okukhethekile, okusetshenziswa emigqeni yesando lacquer enempahla enhle yokulwa nokugqwala. Ingasetshenziswa futhi ekugqokeni imikhumbi yengcindezi, imikhumbi, amabhuloho, nezinto zensimbi. Inombala omuhle kakhulu futhi ifihlwa impuphu futhi isetshenziswa kakhulu ezinengilazini zezimboni, ezinengilazi zasolwandle ezinamathela zezimoto nokumbozwa kokuhlobisa. Ingasetshenziselwa imboni yokumboza nombala we-master batch. Okunamathiselwe kwe-aluminium okungenamaqabunga kukhanya ngosayizi omuhle wengxenyenamba namandla okucasha aphezulu, anomphumela omuhle wokuhlobisa. Isetshenziselwa kabanzi upende wasolwandle, upende wesando, ukuqala kwemikhiqizo ye-electromechanical nopende wezimboni ojwayelekile. Kanye nokusetshenziswa kwesambulela sesikhumba sokumboza.
Ngokunamathisela okungenamaqabunga e-aluminium, izinhlayiya ezincane ezimise okwe-flake zisabalalisa ngokufanayo ezingqimbeni ezifanayo kulo lonke upende noma ungqimba lokumboza. Ngenxa yalokhu, umphumela wombala wezingulube noma ezinye izinto zokufaka imibala ezikhona kupende noma kokumboza zihlala zibonakala ngokuphelele ngaphandle. Ingasetshenziselwa ukudweba kwasolwandle, upende weHammer, i-Primer yemikhiqizo ye-electromechanical.
Isimo Sokugcina se-Aluminium Namathisela
1. Gcina izivalo zivaliwe.
2. Gcina endaweni epholile neyomile esembozweni esivaliwe.
3. Gcina kude nokushisa nokukhanya kwelanga okuqondile.
4. Vimbela ukwakheka kothuli.
5. Qinisekisa ukungena komoya okuhle.
Qaphela: Ngemuva kokugcinwa isikhathi eside, unamathisela uyoma kakhulu kunakuqala.Sicela uphinde uhlole imikhiqizo ngaphambi kokusetshenziswa ukugwema noma yikuphi ukulahleka.
Asikwazi ukuhlinzeka ngedivayisi eyodwa kuphela, kepha futhi sinikezela ngokunamathisela kwe-aluminium yonke noma ulayini wokukhiqiza we-aluminium ophethwe umoya, futhi senze umklamo onengqondo kunazo zonke ngokuya ngesayithi lokusebenza lekhasimende. Ungathola futhi insizakalo ephelele yezobuchwepheshe nefomula yokukhiqiza uze ukwazi ukwenza imikhiqizo efanelekayo.
Langaphambilini Ipeyinti lesiliva le-aluminium lesiliva elingantanta
Olandelayo: Isitolo esidayisa yonke impahla Chinese Supplier Series High Bright Sparkling Effect Aluminium Namathisela
Non-ezintantayo yezimoto upende aluminium sil ...